श्रीमानको सम्पती लिएर अर्कैसँग भाग्ने श्रीमतीको सम्पत्ति खोसिने - Sabal Post
श्रीमानको सम्पती लिएर अर्कैसँग भाग्ने श्रीमतीको सम्पत्ति खोसिने
६ मंसिर २०७५, बिहीबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
मङ्सिर ६ काठमाडौं । भदौ १ गतेबाट लागू भएको मुलुक ऐन समय सापेक्ष भए पनि कार्यान्वयनप्रति सरोकारवाला र अधिवक्ताहरूले आशंका जनाएका छन् ।
२०७४ सालको संविधान पनि राम्रो रहेपनि कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुँदा असफल भएको थियो । २०४७ सालको संविधानमा विश्वमा रहेका राम्रा प्रावधानहरू राखिएका थिए ।
अहिलेको मुलुकी ऐन पनि कार्यान्वयन राम्रोसँग हुन सकेन भने असफल हुने सम्भावना रहेको उनले बताए । कार्यान्वयन गर्दै जाँदा समस्या भयो भने संशोधन गर्न पनि सकिने उनको भनाइ छ ।
मुलुकी ऐनमा खुला कारागारको व्यवस्था राम्रो भए पनि नेपालको सन्दर्भमा उचित छ कि छैन अध्ययन गर्नुपर्ने देखिएको अधिवक्ता थपलियाले बताए ।
‘तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाएकालाई खुला कारागारमा राख्ने भनिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो देशमा त्यो कति व्यवहारिक छ ? खुला कारागार दिनभरि काममा जाने साँझ सजाय भोग्नुपर्ने व्यवस्था अहिलेको मुलुकी ऐनले गरेको छ ।
यसअघिको मुलुकी ऐनले सम्बन्ध विच्छेदले पुरुषलाई धेरै पीडित बनाएको स्मरण गर्दै अधिवक्ता थपलियाले भने, ‘सम्बन्ध विच्छेद अब महिला र पुरुष दुबैले बराबरी रुपमा गर्न पाउँछन् । पहिला महिलाका लागि भन्दा पनि पुरुषलाई सम्बन्ध विच्छेद गर्न समस्या थियो ।’ यस पटक मुलुकी ऐनले पत्नीका कारण सम्बन्ध विच्छेद भएको रहेछ भने सम्पत्ति दिनुपर्दैन ।
पत्नीबाट आजित भएको पतिले सम्बन्ध विच्छेदका लागि अदालतमा निवेदन दिएमा फैसलाका क्रममा पत्नी दोषी देखिएमा पत्नीलाई सम्पत्ति दिनुपर्ने छैन । पत्नी अर्को पुरुषसँग बिहे गरेर गएमा अचल सम्पत्ति पुरानै पतिकोमा रहने व्यवस्था मुलुकी ऐनले गरेको छ । चलसम्पत्ति भनेर महिलाले लैजाने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
मुलुकी ऐनले पारिवारिक बलात्कारलाई कडा बनाएर समस्या उत्पन्न गरेको अधिवक्ता थपलियाले बताए । ‘पत्नीलाई मन लागेन भने पतिविरुद्ध बलात्कारको मुद्दा जति बेला पनि लगाउन सक्ने खतरा छ’, उनले भने, ‘यो प्रावधानले पारिवारिक बिग्रह बढ्ने समस्या हुनेछ ।’
घुस लिँदालिँदै सहायक वन अधिकृत पक्राउ
लाभ लिन तिहारअघि घर भित्र्याउनुपर्ने ५ वस्तु
मजदूरको रुपमा प्रयोग गरिएका विभिन्न स्थानबाट बालकको…
भिसा सेन्टरमा कामदारले कुनै शुल्क तिर्नु नपर्ने…
मैत्री बहुउद्देश्यीय सहकारी बलेटक्सारबाट पाँच लाख चोरी
चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि ‘सपिङ लिस्ट’ तयार…
एकन्तवासको बारेमा के भन्छ हाम्रो पुराण ?
हावाहुरीले टावरमा क्षति पुर्‍याएका कारण रेडियो सुनवलको प्रसारण बन्द
चुरोट छाड्नसाथ शरीरमा कस्तो प्रभाव पर्छ ?
अमेरिकामा आजमात्र २० हजारभन्दा बढीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण